किसुनजी बारे यस्ता कुराचाहिँ अतिशयोक्ति भयो है ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
किसुनजी बारे यस्ता कुराचाहिँ अतिशयोक्ति भयो है !
प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १९:३३
♦ चन्द्रमणि गौतम ♦
नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्येका पछिल्ला नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) को फागुन २० गते पूण्यस्मृति दिवस पर्छ । यो वर्ष उहाँको नवौँ स्मृति दिवस हो । उहाँको निधनकै दिन नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा प्रख्यात उपन्यासकार (बसन्ती, सेतोबाघ जस्ता ऐतिहासिक उपन्यासका लेखक) डायमण्ड शम्शेरको पनि निधन भएको थियो । त्यसकारण किसुनजीको निधनकै दिन डायमण्डजीलाई पनि श्रद्धापूर्वक सम्झने गरौं ।
यतिबेला किसुनजीको गुणगान गाउने बेला चलिरहेको छ । मानिस मरेपछि उसका बारेमा भए–नभएका गुणको तारिफ गर्ने नेपाली चलन किसुनजीका सन्दर्भमा पनि भइरहेको छ । सत्य–तथ्य सँगसँगै अनेक मनगढन्ते कुरा पनि आएका छन् । कतै कुरीकुरी लाग्दो त कतै निराधार र भ्रामक कथा बुनेर उहाँलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने नेपाली कमजोरी प्रकट भइरहेको छ । कसैका बारेमा तारिफै तारिफ गरियो भने त्यो निन्दा बन्न पुग्छ । कसैलाई निन्दामात्र गरिरहह्यो भने त्यो सम्मान र सहानुभूति हुनपुग्छ ।
एकाबिहानै मलमूत्र त्याग्ने, दिनभरि विवेक त्याग्ने, साँझ परेपछि होश–हवास त्याग्ने र रात छिप्पिन थालेपछि बीर्य त्याग्ने ‘त्यागी’ नेता र प्रशासकहरूको बोलवालामा किसुनजीको त्यागको के अर्थ रहला र ! यहाँ धेरैजसो आफ्नै डम्फु बजाएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । किसुनजीको जीवनभरि उहाँलाई गाली र सत्तो सराप गर्नेहरू पनि यतिबेला प्रशंसाका शब्दजाल सुनाइरहेका छन् । यस्तो अनायास मेहरवानी र प्रंशसाको अब कुनै अर्थ छैन । भए नभएका शब्द हालेर कसैको प्रशंसा गर्नु आफ्नै प्रियजनको अवमूल्यन गर्नु हो ।
तर किसुनजीका बारेमा आउनुपर्ने कतिपय कुरा आइरहेको छैन, कतिपय अतिशयोक्ति र भ्रामक कुराहरू पनि आइरहेका छन् । जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्वीकृति उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाभित्र सक्नेगरी भएको हो । त्यसको सम्पन्नताका लागि उहाँकै अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री स्तरीय निर्देशन समिति पनि बनेको थियो । तर खोई यो कुरा ? काठमाडौंका मानिस र किसुनजीबारे जानिफकारहरूलाई अब मेलम्ची आयोजना चाहिएन ? गोरखापत्रलाई रङ्गिन कलेबरमा लैजाने प्रक्रियाको प्रारम्भ उहाँकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा शुरू भएको हो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गर्न, जनआन्दोलनको फलका रुपमा २०४७ को संविधान जारी गर्न र एकवर्षको अन्तरिम कालभित्रैमा दोस्रो आमनिर्वाचन सुसम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नमा उहाँको अग्रणी भूमिका छ ।प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर राजनीति पीडितहरूलाई सरकारबाट राहत र सहयोग दिलाउनमा पनि उहाँको अविष्मरणीय भूमिका छ । राजनीति पीडित सहयोग समितिको अध्यक्षता आफैँले गरी त्यसलाई सफल बनाउनमा उहाँको बिर्सिनसक्नु योगदान छ ।
माओवादीसँग शान्तिवार्ता गरी टुङ्गोमा पु¥याउन उहाँकै पालामा शेरबहादुर देउबाको संयोजकत्वमा संस्थागत ढङ्गले वार्ता समिति गठन भएको थियो । त्यसैले अरू केही नभए पनि संवाद र पारस्परिक अस्तित्वको मान्यतामा माओवादीलाई ल्याएको हो । के यी कुरा हामीले बिर्सेकै हौँ ? कि हल्ला र भ्रामक प्रचारवाजीमा रूमल्लिएर हामी हल्लैहल्लाको देशका नागरिकको पहिचान देखाइरहेका हौं ?
किसुनजी त्यागी र एक महान राजनेता हुनुहुन्थ्यो, तर नैतिकता र सिद्धान्त त्याग उहाँबाट कहिल्यै भएन । एकाबिहानै मलमूत्र त्याग्ने, दिनभरि विवेक त्याग्ने, साँझ परेपछि होश–हवास त्याग्ने र रात छिप्पिन थालेपछि बीर्य त्याग्ने ‘त्यागी’ नेता र प्रशासकहरूको बोलवालामा किसुनजीको त्यागको के अर्थ रहला र ! यहाँ धेरैजसो आफ्नै डम्फु बजाएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । किसुनजीको जीवनभरि उहाँलाई गाली र सत्तो सराप गर्नेहरू पनि यतिबेला प्रशंसाका शब्दजाल सुनाइरहेका छन् । यस्तो अनायास मेहरवानी र प्रंशसाको अब कुनै अर्थ छैन । भए नभएका शब्द हालेर कसैको प्रशंसा गर्नु आफ्नै प्रियजनको अवमूल्यन गर्नु हो ।
किसुनजी गुणैगुणले मात्र सम्पन्न मान्छे हुनुहुन्न थियो । मानवोचित कमजोरी उहाँसँग पनि थिए । गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने ठाउँमा पनि उहाँ ठट्टा र परिहाँसमा कुरा सक्नुहुन्थ्यो । तर कमजोरी यतिबेला कोट्याउने होइन, उहाँका गुणहरूलाई अरूको लागि अनुकरणीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्ने हो । किसुनजीलाई कसैले भगवान गौतम बुद्ध, कसैले महात्मा गान्धी भन्दाभन्दै कसैले क्राइस्ट जतिकै पूजनीय भनेको पनि सुनियो । यस्ता कुरीकुरीलाग्दा प्रशंसा नगर्नु बेश होला । उहाँ भगवानको भाई वा अवतार होइन, कमजोरीहरू पनि मिसिएको महान नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने हेक्का राखांैं ।
किसुनजीलाई महान बनाउन यतिबेला कसै कसैले बीपी र गणेशमानजीका बारेमा अन्टसन्ट बोलेर यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्न खोजिँदैछ मानौं बीपी र गणेशमान भनेका कोही होइनन्, जे हुन् किसुनजी मात्र हुन् । किसुनजी बाँचेकै बेला यस्तो मूल्याङ्कन गरेको भए उहाँ कति रिसाउनु हुन्थ्यो होला ! बीपी र गणेशमान जेलबाट कागज गरेर पञ्चायतलाई मान्छौं भनी छुट्नु भएको होइन । तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुवर्ण शम्शेरले २०२५ सालमा दिएको बक्तब्यलाई समर्थन गरेको त हो, तर त्यसैलाई गाईडलाइन बनाएको होइन । यदि त्यसो भएको भए २०२५ सालमा बीपी र गणेशमानजीहरू छुटेपछि पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिको आयोजना कसरी ग¥यो त !
२०१७ सालमा उहाँलाई पनि पक्रेर जेल हाल्दा राजालाई उहाँको प्रश्न थियो, “म सरकारमा बसेको मानिस होइन । सबैको साझा सभामुख थिएँ । तर मेरो अपराध के थियो ? के सभामुख हुनु नै अपराध हो ? राजाले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि अर्को चुनाब नभएसम्म सभामुखको ओहोदा जाँदैन । त्यसैले मलाई बिनासर्त रिहामात्र होइन, अहिलेसम्मको सभामुखको तलब–भत्ता र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । म कागज गरेर त छुट्दिन, बरू मृत्युपत्रमा सही गरिदिन्छु ।”
किसुनजी भन्नुहुन्थ्यो, मलाई बीपीले पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भयो, गणेशमानजीले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । बीपीले चाहेको भए गिरिजाबाबुलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएपनि हामी उहाँको खिलाफमा मोर्चा कसेर हिँड्ने थिएनौं । तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि उहाँले तत्कालीन पार्टी महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई बहुदलीय ब्यवस्थाको उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्री भनी प्रस्तावित गर्नुभयो । उहाँहरू दुवैको अनुकम्पा ममाथि छ । उहाँहरू र म समकालीन हौं तर उहाँहरू मेरा आदरणीय नेता हुनुहुन्छ ।
हुनपनि किसुनजीले २०१५ सालको चुनाव आफ्नै लापरवाही र किञ्चित ‘छाडा’ ब्यवहारले गर्दा हार्नुभयो । तर हारेका किसुनजीलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने काममा बीपी कोइरालाको विशेष भूमिका थियो । सभामुखका रूपमा किसुनजीको कार्यसम्पादन, संसदमा निष्पक्षता, बौद्धिकता आदि गुणले पूर्णसफल सभामुखका रूपमा रह्यो । २०१७ सालमा उहाँलाई पनि पक्रेर जेल हाल्दा राजालाई उहाँको प्रश्न थियो, “म सरकारमा बसेको मानिस होइन । सबैको साझा सभामुख थिएँ । तर मेरो अपराध के थियो ? के सभामुख हुनु नै अपराध हो ? राजाले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि अर्को चुनाब नभएसम्म सभामुखको ओहोदा जाँदैन । त्यसैले मलाई बिनासर्त रिहामात्र होइन, अहिलेसम्मको सभामुखको तलब–भत्ता र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । म कागज गरेर त छुट्दिन, बरू मृत्युपत्रमा सही गरिदिन्छु ।”
कसैकसैले हिजोआज भनेको पढिन्छ, “किसुनजी त कहिल्यै नरिसाउने मान्छे !” तर उहाँ रिसाउनु पनि हुन्थ्यो भनी सत्य बोल्दा के बिग्रन्थ्यो ? उहाँले कतिपटक सभाका सहभागी कार्यकर्तालाई “घोक्राएर निकालिदिन्छु” भनेको, ‘मु…’ जस्ता शब्दले गाली गरेको, धोती फुकालेर देखाइदिएको जस्ता उहाँका मौलिक कमजोरी, जसले पार्टी र देशका काममा कहिल्यै अप्ठ्यारोमा पारेनन्, परन्तु त्यस्ता पक्ष उहाँका स्वभावसँग अभिन्न भएर अङ्कित भइसकेका छन् । जगजाहेर ती कुरालाई किन लुकाउने ? तर किसुनजीले जसलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, उसका लागि त्यो गाली नै वरदान सावित हुने गरेको यथार्थ पनि अविष्मरणीय छ ।
किसुनजीको सार्वजनिक जीवनमा रक्सी एउटा विवादको विषयका रूपमा आएको छ । उहाँका महानतालाई रक्सीले अवमूल्यन गर्न खोजेको छ । २०५३ सालको एक साँझ नेपाल टीभीको अन्तवार्तामा उहाँले यस प्रसङ्गमा भन्नुभयो, “मलाई हप्तामा दुई बोतल रक्सी चाहिन्छ । मसँग पैसा हुँदैन । रक्सी खाने पैसाकै लागि पनि मलाई सांसद हुनुपरेको छ । म रक्सी पिउँछु । मैले सुजाता कोइरालादेखि बडबडे मानिससँग बसेर पनि रक्सी खाएको छु ।…….” जतिसुकै आफैंलाई ब्यङ्ग्य गरेको भएपनि उहाँले यसो बोल्नु आफ्नै बेइज्जती गर्नु र कांग्रेसका नेताको चरित्र भनी जोरीपारीलाई काखी बजाउने मौका दिनु हो ।
यी सबका बाबजुद किसुनजी दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा सबभन्दा त्यागी र इमानदार नेताका रूपमा आउनुहुन्छ । उहाँका कमजोरीजन्य स्वभाव र आनीबानीलाई बिर्सिदिउँ । किनकि उहाँका योगदानका अगाडि ती सबै खोटहरू इतिहासका लागि क्षम्य छन् । उहाँको सबभन्दा ठूलो योगदान भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मसाललाई देशभित्रै दियोका रूपमा जोगाएर राख्न उहाँले गरेको संघर्ष र योगदानप्रति सबै नतमस्तक हुनैपर्छ । वीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजीजस्ता मूर्धन्य नेताहरू निर्वासनमा गएर देशभित्र परिवर्तन गर्ने प्रयत्नमा लाग्दा उहाँले देश छोडेर आफू कतै नजाने दृढ अठोट लिनुभयो । स्वच्छ छवि, सादगी, उच्च विचार, आत्म विश्वास र सिद्धान्त र मूल्यको राजनीतिलाई तिलाञ्जली नदिने दृढनिश्चयी राजनेताका रूपमा समकालिन र भावी पुस्ताका साथै इतिहासले उहाँलाई सदैव श्रद्धाका साथ सम्झिरहने छ ।
#sher bdr deuba
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाइसक्यो’
न्यायपरिषदद्वारा अडियो काण्डमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश कोइराला निलम्बित
कांग्रेस नेता कोइराला र अर्थविदबीच छलफल, देश जटिल मोडमा रहेको निष्कर्ष
जीतपुरसिमराको नगरसभा पुनः स्थगित
हैजासम्बन्धी समस्या पर्यो ११८० मा फोन गर्नुस्
राप्रपा पाँचथरद्धारा कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना
एनआई सी एशिया बैंकको क्यूआर कोड वितरण अभियान, प्रदेश १…
आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा
गायिका दिलमाया विश्वकर्माको मृत्यु प्रकरणमा शंकित एक जना पक्राउ
प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्रबीच गोप्य भेटघाटः कांग्रेसलाई गलाउने कसरत
राष्ट्रपति भण्डारीले गराइन चारमन्त्रीलाई शपथग्रहण, मन्त्रीको आजै पदबहाली
भृकुटीमण्डपको जग्गा अनियमितता प्रकरण : अख्तियारको नजर कता ? टेण्डर…
एमालेलाई बजेट अनैतिक लाग्यो भन्दैमा मैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन्ः…
आरोहण गुरुकुलमा सुरु भयो बहुभाषिक नाटक उत्सब
सफल परीक्षणपछि क्यासिफिककाे नेपालमा ब्रोडब्यान्ड बाटाे खुल्याे
टेलिशृंखला ‘परदेशी हजुर’मा विदेशिएकाहरुको कथा